जुन 11, 2020 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
माइक्रोसफ्ट को यथासक्य ग्राहक-उन्मुख सफ्टवेयर कम्पनी को रूपमा पहिचान गरिएको छ. यसलाई सधैं कार्यक्रम यसको प्रयोगकर्तालाई सजिलो र सुविधा ल्याउन सक्छ भनेर शुरू गरेको छ. संसारको साथ सम्पर्कमा रहन, पाठ सन्देशहरू गर्न र भिडियो वा अडियो कल सञ्चालन गर्न, माइक्रोसफ्ट यसको अथाह आधिकारिक अनुप्रयोग व्यापक यसको एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता लागि स्काइप रूपमा चिनिने डिजाइन.
स्काइप डाउनलोड Android
स्काइप APK डाउनलोड
स्काइप लाइट APK
Android ट्याब्लेट लागि स्काइप
डाउनलोड Skype APK
सर्वेक्षण अनुसार, धेरै 250 लाख प्रयोगकर्ता आफ्नो संचार को लागि एक उपकरण रूपमा स्काइप प्रयोग गर्दै. र प्रयोगकर्ताहरूको संख्या कारण यसको कुशल प्रदर्शन गर्न प्रत्येक पारित दिन संग बढ्दै छ. माइक्रोसफ्ट द्वारा यो अनुप्रयोग स्काइप प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरूको कुनै पनि संग आपस गर्न मदत गर्छ. स्काइप को अन्तरक्रियामा को दुनिया मा प्रवेश गर्न तपाईं केवल राम्रो इन्टरनेट जडान वा सेलुलर डाटा आवश्यक.
तपाईंको Android फोन तपाईं चाहनुहुन्छ कुनै तर स्काइप को मद्दत संग कुरा गरौं गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग पनि भिडियो अन्तरक्रियामा. यो विशेष अनुप्रयोग एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको लागि क्रांति वाहेक. तपाईं एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता लागि स्काइप पूरा पुस्तिका गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसको प्रक्रिया र उपयोग, यसको उल्लेखनीय सुविधा र प्रतिस्पर्धी किनारा त्यसपछि यो उपयोगी लेख पढ्दा राख्न.
Android को लागि स्काइप डाउनलोड
तपाईं effortlessly सरल कदम पछ्याउँदै Android उपकरणहरू यो उल्लेखनीय स्काइप अनुप्रयोग प्राप्त गर्न सक्छन्
Android उपकरणहरू र s मा प्ले स्टोरमा जानुहोस्स्काइप लागि earch वा डाउनलोड दिइएको लिंक बाट यहाँ.
मा क्लिक गर्नुहोस् स्थापना बटन स्काइप को डाउनलोड र स्थापना को लागि.
एक पटक तपाईं आफ्नो अनुप्रयोग स्थापित गरेका छन्, अब क्लिक गर्नुहोस् र प्राप्त दर्ता अनुप्रयोगमा
तपाईं प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ आफ्नो इमेल खाता र पासवर्ड.
तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अवस्थित खाता तर तपाईं त छैन यदि तपाईं एक बनाउन नयाँ.
तपाईंको चयन स्काइप नाम, जो रूपमा प्रयोग भएको छ आफ्नो स्काइप आईडी कल सुरु गर्न.
1 स्काइप लगइन इन्टरफेस:
1.1 संपर्क थप्न & कल
1.2 स्काइप को सुविधाहरू:
1.3 उच्च गुणस्तरको भिडियो & अडियो कल:
1.4 स्काइप मा स्क्रिन साझेदारी
2.0.1 स्काइप को प्रतिस्पर्धी किनारा:
3 सबै उपकरणहरू लागि skype:
3.0.1 दुवै अनलाइन र अफलाइन कलको लागि skype
3.1 Landlines मा कल & स्काइप संग मोबाइल फोन नम्बर:
स्काइप लगइन इन्टरफेस:
संपर्क थप्न & कल
स्काइप मा सम्पर्क थप्दा लागि, तपाईंले पहिले नै स्काइप प्रयोग गर्दै र आफ्नो ई-मेल खाता लिङ्क भएका सबै प्रयोगकर्ता देखाउँछ कि एक प्यानल देख्ने. अर्को तरिका तपाईं सन्देश वा ई-मेल जो कोहीले जो स्काइप प्रयोग र आफ्नो स्काइप आईडी थप्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक अन्य कल सुरु गर्न सक्छ.
तपाईं स्काइप को मुख्य मेनु मा मान्छे थप्नुहोस् चयन गरेर कुनै पनि सम्पर्क थप्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि बस यसको स्काइप प्रयोगकर्ता नाम लेखन र त्यसपछि क्लिक सम्पर्क थप्न द्वारा आवश्यक प्रयोगकर्ताहरू थप्न सक्नुहुन्छ. यस्का साथसाथै, तपाईं पनि मनपर्ने विशेषताहरूले आफ्नो एड तिनीहरूलाई थपेर आफ्नो सबैभन्दा प्रयोग सम्पर्क सूची बनाउन सक्छ. तपाईं पनि ब्लक वा आफ्नो गोपनीयता र सुरक्षा मुद्दाहरू लागि सम्पर्क हटाउन सक्नुहुन्छ.
स्काइप को सुविधाहरू:
माइक्रोसफ्ट द्वारा skype अमेरिका संसारभरि सबैलाई नमस्ते भन्न भनेर अद्वितीय मनसाय आफ्नो ग्राहकहरु सेवा छ.
विचार पछि दूरी कम र यो तनाव मुक्त लागि मान्छे रहनेछ लिङ्क बनाउन छ. तपाईं शारीरिक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जब यो आफ्नो परिवार र आफ्नो संगठन संग सम्पर्कमा रहन अत्यन्तै लाभदायक छ.
स्काइप सन्तुष्ट ग्राहकहरु को एक विशाल सूची छ. दिनहुँ, लाखौं मानिसहरू कुराकानी वा अन्य कल गर्न स्काइप प्रयोग. स्काइप सहित विशिष्ट सुविधाहरू भेटी छ.
उच्च गुणस्तरको भिडियो & अडियो कल:
स्काइप sensibly आफ्नो ग्राहकहरु गर्न यथासक्य उच्च गुणस्तरको भिडियो र अडियो कल परिणाम दिन डिजाइन गरिएको छ. तपाईं क्रिस्टल स्पष्ट भिडियो अनुभव गर्न सक्छन् र अडियो सबै दुनिया भर भनिएको.
सबै भन्दा राम्रो भाग हो, स्काइप एक एक कल वा समूह कलको लागि दुवै आफ्नो अधिकतम गुणस्तर परिणाम दिन्छ. के तपाईं आफ्नो भिडियो वा अडियो कल मा कुनै पनि रुकावट जोगिन राम्रो इन्टरनेट जडान प्रयोग हो भनेर पक्का गर्नुपर्छ.
स्काइप मा स्क्रिन साझेदारी
यो स्काइप द्वारा प्रस्तावित धेरै उपयोगी सुविधा छ. स्क्रिन साझेदारी को मद्दतले, तपाईं सजिलै आफ्नो प्रस्तुतीकरण साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, तस्वीर, कागजात वा केहि एक कल समयमा.
यो कर्पोरेट संसारको लागि रहँदा लाभदायक छ. कर्मचारी आफ्नो महत्त्वपूर्ण फाइल वा कागजात साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, प्रस्तुति शो, परियोजना विवरण, आचरण विश्लेषण, ग्राहकको आवश्यकताहरु पनि आफ्नो कल समयमा मुद्दाहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो च्याट लुकाउन चाहन्छु वा कुनै पनि सुरक्षा वा व्यक्तिगत कारण कल भने, त्यसपछि तपाईं स्काइप मार्फत सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ. यो अनुप्रयोग अन्त गुप्तिकरण प्रक्रिया अन्त संग एक निजी कुराकानी गर्न सक्षम.
तपाईंको कल रेकर्ड:
स्काइप पनि तपाईं आफ्नो भिडियो वा अडियो कल रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईं कुनै पनि बहुमूल्य सन्देश वा क्षण रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ जब यो उपयोगी छ. यो पनि सिक्ने मा एड्स र तल तपाईं आफ्नो कल समयमा मा छुटेका कि अंक टिप्पण.
यो सुविधा पनि काम गर्दछ कर्पोरेट संसारको लागि, तपाईं फेरि आफ्नो प्रशिक्षक वा मालिक निर्देशन सुन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई आफ्नो कल को रेकर्डिङ हेर्दै द्वारा सजिलै गर्न सक्छन्.
स्काइप को प्रतिस्पर्धी किनारा:
स्काइप भन्दा बढी यसको ग्राहकहरु सेवा गरिएको छ 10 वर्ष. यो प्रतिस्पर्धी बजार मा एक विशाल छ जो माइक्रोसफ्ट थप सुविधाहरू गर्दछ यो भिडियो टेलिफोन अनुप्रयोग निर्मित छ जो अनुहार समय जस्तै अन्य प्रतियोगिहरु, गुगल जोडी, आदि. निम्त्याउने छैन. यो यो अनुप्रयोग दुनिया भर सबै भन्दा प्रयोग अनुप्रयोगहरू मध्ये एक छ कि कारण छ. प्रमुख प्रतिस्पर्धी सुविधा समावेश
सबै उपकरणहरू लागि skype:
मूलतः, स्काइप एन्ड्रोइड मोबाइल फोन सहित एक Android प्रयोगकर्ताको लागि डिजाइन गरिएको छ, Android ट्याब्लेटहरू, र अन्य एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू. तर रोचक भाग स्काइप पनि सहित माइक्रोसफ्ट विन्डोज अन्य सबै उत्पादनहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ छ, लिनक्स, म्याकिन्टस, ब्ल्याकबेरी, र सबै एप्पल ट्याब्लेट र स्मार्टफोन. तपाईं कुनै पनि उपकरण छ भने तपाईं बस स्काइप डाउनलोड गर्न र सबै भन्दा अन्तरक्रियात्मक भिडियो टेलिफोनी अनुप्रयोगहरू एक आनन्द उठाउन सक्छौं.
दुवै अनलाइन र अफलाइन कलको लागि skype
यो परम स्काइप अनुप्रयोगको अर्को प्रतिस्पर्धी तत्व तपाईं मात्र इन्टरनेट जडान नगर्ने अनलाइन छन् तर पनि मान्छे संग जोडिएको प्राप्त कल गर्न सक्छन् जो मान्छे बोलाउन सक्छ. स्काइप यसको प्रयोगकर्ता यो प्रिमियम प्रस्ताव गर्न प्रस्ताव गरिएको छ मोबाइल नम्बर र ल्याण्डलाइन संख्या मा कल.
विशिष्ट अनलाइन कलको लागि, तपाईं केहि तिर्न छैन. तपाईं आवश्यक सबै एक कल गर्न आफ्नो इन्टरनेट जडान छ. तर फोन नम्बर वा ल्यान्डलाइन संख्या मा कल लागि, स्काइप यसको प्रयोगकर्तालाई धेरै आर्थिक सदस्यता शुल्क. स्काइप अन्य प्रमुख लाभ को लागि आफ्नो प्रयोगकर्ता छन्
तपाईं आफ्नो परिवार कल गर्न सक्नुहुन्छ, सहकर्मी वा विश्वभरिका कहीं मित्र. स्काइप सबै दुनिया भर विभिन्न देशहरूमा लागि अति लागत-प्रभावकारी कल योजना भेटी छ.
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता बाहेक, यी सुविधाहरू हरेक सहित उपकरण डेस्कटपमा लागू हुन्छन्, आईफोन, Xbox, OSX र धेरै
स्काइप आफ्नो ग्राहकहरु धेरै विधिहरू भिषा सहित सदस्यताका लागि भुक्तानी गर्न अनुमति दिन्छ, मास्टर कार्ड, JCB, PayPal, खुद्रा, स्याउ इन-अनुप्रयोग खरिद, अमेरिकन एक्सप्रेस, वेस्टर्न युनियन र धेरै
प्रक्रिया धेरै सजिलो छ. तपाईं बस सदस्यताको लागि तिर्न, त्यसपछि स्काइप अनुप्रयोग डाउनलोड र सबै भन्दा राम्रो भिडियो टेलिफोनी सफ्टवेयर कल सुरु.
Landlines मा कल & स्काइप संग मोबाइल फोन नम्बर:
तपाईंको Android फोन प्रयोग तपाईंलाई आवश्यक स्काइप मा स्काइप-को ल्याण्डलाइन कल गर्न स्काइप क्रेडिट.
Click on the Skype credit link तपाईंको खातामा स्काइप क्रेडिट थप्न.
तपाईं स्काइप क्रेडिट छैन भने र तपाईं स्काइप-को ल्यान्डलाइन फोन गर्न प्रयास गर्दै, Skype will send youapop-up to top-up your account.
तपाईँ या त मासिक स्काइप सदस्यता प्राप्त वा तपाईं माथि-माथि गर्न सक्नुहुन्छ एक-बन्द भुक्तानी प्रयोग गर्न सक्छन्.
मासिक सदस्यता सेट अप, यदि स्काइप आफ्नो दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय कलको लागि प्रयोग गरिन्छ. You will needadebit card for the subscription process.
Choose the amount of Skype credit you would like to add and 'जारी' मा क्लिक गर्नुहोस्.
खाली बक्स मा क्लिक र आफ्नो डेबिट कार्ड दर्ता आफ्नो हिसाब विवरणहरू भर्नु सुरु.
तपाईंको क्रेडिट खरिद र तपाईं स्काइप प्रयोग गर्न तयार छन्.
अब तपाईंले केही स्काइप क्रेडिट तपाईं ल्यान्डलाइन नम्बर वा मोबाइल फोन कल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ किनेको छ.
सुरु गर्न, click on the phone icon तस्बिरमा तल देखाइएको.
तपाईं देशहरुमा को कोड थप्दा संग कुरा गर्न चाहेको नम्बर डायल र कल बटन क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईं आफ्नो कल संग गरिन्छ गर्दा पर्खनुहोस्.
'थप नम्बर' मा एक ल्याण्डलाइन नम्बर क्लिक थप्न then enter the landline number you wish to add to your list.
तपाईं सफलतापूर्वक स्काइप अनुप्रयोग स्थापित गरेको आशा. तपाईं कुनै पनि समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, टिप्पणी बक्समा आफ्नो मुद्दा ड्रप. आफ्नो प्रश्नहरु सकेसम्म चाँडै समाधान हुनेछन्. धैर्य राख्दै सबै चरणहरू पालना, you will surely be able to use Skype very easily.